E nwere ọdịiche dị iche iche n'etiti bolts na skru: 1. Ekwesịrị iji bolts n'oghere na akụ. Enwere ike ịsa skru ozugbo na matriks nke usoro dị n'ime; 2. Bolts kwesịrị ka ejiri oghere dị larịị kpochie ma kpọchie ya, ike mkpuchi mkpọchi ahụ pere mpe. I nwekwara ike lo ...
Kedu ihe kposara kwesịrị ekwesị?
A na-ejikarị skru eme ihe. Kwụsị skru bụ otu n'ime ihe anyị na-ejikọ ọnụ. A na-ejikarị ya na mpaghara anọ ndị a: 1. Igwe anaghị agba nchara, efere ọla, efere galvanized, ntinye injin. 2. Mgbakwunye mgbidi ụlọ nke igwe elekere nke ọkụ na ntinye nke ime ụlọ na n'èzí. 3. Gene ...
Ihe choro maka ndozi nke ihe kwesiri
Igwe na-egwupụta onwe ya bụ akụkụ ihe eji arụ ọrụ, nke bụ nnukwu ihe achọrọ. Ọtụtụ mgbe, bolts, kposara, rivets, wdg, iji hụ na nchekwa ma ọ bụ na-adịghị mkpa ịtụle mmetụta nke okpomọkụ, gburugburu ọjọọ ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ ndị ọzọ dị ize ndụ. Ihe ndị a na-ahụkarị bụ carbon carbon, obere ...
Ike jidesie ike
Ihe njiri ike nwere ike dị elu bụ ndị klaasị 8.8, Klas 9.8, klas 10.9, klas 12.9 fasteners. A na-eji ndị na-ejide ike dị elu na-arụ ọrụ siri ike, arụmọrụ tensile dị mma, arụmọrụ dị mma dị elu, ike njikọ siri ike, ịrụ ọrụ seismic dị mma, ma dị mfe ma ...
Senco DS225-18V Duraspin Auto-Feed Screw Driver bụ anụ ọhịa na-ejide ngwa ngwa nke ngwá ọrụ na-ewe arụ ọrụ gị n'ọkwa ọzọ. Site na njiri mara nke ahaziri nke ọma, ị ga-eji ụgbọ mmiri gafee njem ọzọ ma ọ bụ ọrụ subfloor gị. Ndị otu nọ n'azụ Senco Duraspin DS225-18V Durasping Au…